Madaxweynaha PSG Oo Neymar Ku Kulmaya Brazil & Ujeedka Qarsoon Ee Safarkiisa [Ogow] %
Madaxweynaha PSG Oo Neymar Ku Kulmaya Brazil & Ujeedka Qarsoon Ee Safarkiisa [Ogow]
Madaxweynaha kooxda kubada cagta Paris Saint-Germain, ninka lagu magacaabo Nasser Al Khelaifi, aya wuxuu uduulayaa Isbuucaan wadanka Brazil si uu usoo indha-indheeyo xaalada xidiga Qaliinka lagu sameeyay ee Neymar Jr.
Socodaalka Gudoomiyaha PSG, uu ku tegayo wadankaas Qaarada Koonfur Ameerika ku yaala ayaa waxaa ku wehlinayay Agaasimaha dhanka Cayaaraha kooxdaan reer France, ninka lagu magacaabo Antero Henrique.
Ujeedka safarkooda ayaa wuxuu salka ku hayaa warar maalmihii lasoo dhaafay si weyn loo baahinayay, kuwaasoo ahaa in Neymar, mustaqbalkiisa uu yahay mid aanan sal fadhiya ku lahayn Faransiiska uu bixi doono.
Sida laga soo xigtay, warbaahinta Faransiiska, Neymar ayaa wuxuu doonayaa inuu dib ugu soo labato horyaalka La Liga, ee wadanka Spain, islamarkaana uu midkood ku biiri doono Real Madrid ama kooxdiisii hore ee Barcelona.
Barnaamij-ka lagu magacaabo Telefoot, ee ka baxa mid kamid ah, Tv-yadda Faransiiska ayaa wuxuu baahiyay in wafdiga uu Nasser Al Khelaifi, hogaaminayo ay diirada kusoo raadi doonan socodaalkooda dhowr arrimood.
Marka ugu horeyso oo ah inay soo qiimeeyaan caafimaadka wiilkaan iyo marka labaad oo ah inay weydiiyaan hadii uu diyaar uyahay inuu kordhiyo heshiiska uu kooxda kula joogo hadda 2022, marka uu dhamaado.
Laacibkaan reer Brazil ayaa wuxuu PSG uga soo biiray dhigeeda Barcelona sanadkii hore, markaasoo lagu soo iibsaday aduun dhan 222 Milyan, laakiin hada waxaa la sheegayaa in uusan ku farax-saneen caasimada Faransiiska.
Neymar, ayaa inta ka dhiman xili ciyaareedkan wuxuu garoomada kaga maqnaan doonaa dhaawacaas uu hada la Jiifo, isagoona xitaa halis ugu jira inuu gabi ahaanba seegay koobka aduunka ee sanadkaan 2018.
Nasser Al-Khelaifi.NeymarPSGReal Madrid
Hadii Ay Tabeen Leo, Bandhigii Dembele, Guushii Malaga & Coutinho Oo Arimo Xasaasi Ka Hadlay
Hordhac: Stoke vs Man City – Sky Blues Oo U Taag-taagsaneysa Hanadasha Premier League